Izindaba - Izinzuzo ezinhlanu zamabhodlela engilazi emakethe yokupakisha
Njengamanje, emkhakheni wokupakisha emakethe yasekhaya, izinto zokupakisha zezinto ezahlukahlukene, ikakhulukazi ipulasitiki (isakhiwo: i-resin yokwenziwa, i-plasticizer, i-stabilizer, umbala) ukufakwa kwamabhodlela, kuhlala uhhafu wemakethe esezingeni eliphansi embonini yeziphuzo. I-Jiangshan, ikakhulukazi ngenxa yezindleko eziphansi, ukuthuthwa okulula, nokuvuselelwa okulula kwamabhodlela epulasitiki. Inkinga ye-phenol A (Emerson) emabhodleleni epulasitiki adalulwe kaninginingi ibuye ibangele abathengi abaningi (Abathengi) banake kakhulu iziphuzo ezifakwe emabhodleleni engilazi lapho bekhetha iziphuzo abazisebenzisayo, ngoba ukufakwa kwebhodlela lengilazi akubonisi nje kuphela umoya ophakeme, kepha futhi kudlulile (tōng guò) Ukuhlolwa komnyango kazwelonke wokuhlola ikhwalithi yempahla yokupakisha ethembekile abathengi.
Ukulahleka kancane kancane kwamakhasimende kuvuse ukuqapha kwezinkampani zeziphuzo ebezisebenzisa amabhodlela epulasitiki ukupakisha. Abanye abakhiqizi ababona kude bashiye amabhodlela epulasitiki bashintshela emabhodleleni engilazi. Yize kuzokhuphula izindleko zomkhiqizo ekuqaleni, imakethe izoba nesikhathi esithile sokuzivumelanisa nezimo. Ukucatshangelwa kwesikhathi eside kubalulekile. Uma izinkampani zendabuko zifuna ukuwina imakethe isikhathi eside, kufanele ziguquke futhi zivumelane kuphela. Izinhliziyo zabantu zinganqoba imakethe. Isizathu sokuthi ukufakwa kwengilazi kuzozuza kancane kancane ingxenye enkulu yesabelo semakethe futhi kuthandwe izinkampani zokupakisha kumele kube nezinzuzo zako.
Ake ngikwazise ukuthi ziyini izinzuzo zokupakishwa kwamabhodlela engilazi:
(1) Okwenziwe ngengilazi kunezinto ezingenamthofu nezingenabungozi, futhi futhi kunezindawo ezinhle zokuvimbela, ezingavimbela kahle uketshezi nokwenyuka kwezinto ezintweni ezisebhodleleni ngamagesi ahlukahlukene, futhi kungavimbela ngempumelelo ukungazinzi kokuqukethwe. Izithako zihwamuka ziye emkhathini;
(2) Amabhodlela engilazi angavuselelwa futhi asetshenziswe kaninginingi, kunciphisa izindleko zokupakisha kwamabhizinisi;
(3) Ukusobala kwengilazi okusobala kungakhipha kalula umbala wokuqukethwe kwebhodlela. Ibhodlela lengilazi lesitsha sokupakisha isiphuzo sezwe lami, ingilazi futhi luhlobo lwezinto zokupakisha ezinomlando omude. Njengoba izinto eziningi zokupakisha zithululela emakethe, iziqukathi zengilazi zisesikhundleni esibalulekile ekupakisheni isiphuzo, okungahlukaniswa nezici zaso zokupakisha ezinye izinto zokupakisha ezingakwazi ukuzithathela indawo.
(4) Ibhodlela lengilazi liphephile futhi linenhlanzeko, alinabungozi futhi alinabungozi, linokumelana nokugqwala okuhle ne-acid corrosion resistance, futhi linezinzuzo ezikhethekile zokupakisha embonini yewayini, embonini yobisi, embonini kawoyela edliwayo, embonini yeziphuzo, njll. i-asidi. Izinto ezifana nemifino nesiphuzo, ukupakisha uviniga odliwayo;
(5) Ngaphezu kwalokho, ngoba amabhodlela engilazi alungele ukukhiqizwa ngobuningi kwemigqa yokukhiqiza okuzenzakalelayo yamabhizinisi, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bezingilazi zasekhaya ezigcwalisa ubuchwepheshe nemishini nakho kuvuthiwe, futhi ukufakwa kwebhodlela lengilazi kunenzuzo enkulu kakhulu yokukhiqiza endlini kanye nezimakethe zangaphandle.
Ezimpilweni zethu, ubhiya yisiphuzo esithandwa kakhulu ngoba izinga laso aliphezulu kangako, futhi sinambitha bushelelezi futhi simnandi, futhi akulula ukudakwa uma ubuphuza. Ngasikhathi sinye, ubhiya ugcwele amagwebu athile. , Lenza ukuthi linambitheke kangcono, futhi lisabela kakhudlwana esicongweni solimi, ngakho-ke ngemuva kokungena ezweni lethu, iwayini selibambe abantu abasha ngokushesha. Imakethe yotshwala ithandwa kakhulu yintsha eningi, kepha uma ufuna ukuhambisa ubhiya ezindaweni ezahlukahlukene kumele futhi udinge ukupakisha okuhlukahlukene. Kunezinto ezimbili ezijwayelekile zokupakisha ubhiya emakethe, eyodwa ubhiya osemabhodleleni engilazi, kanti enye ubhiya osemathinini. Uyini umehluko phakathi kwalokhu okubili? Ekuqaleni, intsha eningi kumele ukuthi yayicabanga ukuthi akukho mehluko phakathi kwalokhu okubili, ngoba nje izinto zokwakha zehlukile. Eqinisweni, uma usazi isizathu salokho, kulinganiselwa ukuthi ngeke uthenge ubhiya ongafanele uma uphuza ubhiya ngokuzayo.
Sonke siyazi ukuthi eminyakeni eyishumi nambili noma engakaphambi kobuntwana bawo wonke umuntu, amathini amaningi emakethe ayengathandwa kangako, ngakho-ke imakethe kabhiya yayisemakethe ngaleso sikhathi, ubhiya webhodlela lengilazi kwakuyinto ejwayelekile, futhi eminyakeni eyishumi edlule, amathini ingilazi ikhipha ubhiya kancane kancane. Emashalofini ezitolo ezinkulu noma ezitolo, sihlala sibona ubhiya emathini. Ngenxa yezindleko zayo eziphansi, isisindo esincane, okulula ukusithwala, ingagcina ubuqotho obungcono ngesikhathi sokuhamba, ngakho-ke amathini kabhiya ayathandwa kubantu abaningi. Funa ngemva.
Kepha uma uhlelo lokukhiqiza kwezolimo luye kweminye imigoqo yokupheka yobuciko esezingeni eliphezulu, uzothola zonke izinhlobo zikabhiya emashalofini, cishe zonke zingamabhodlela engilazi, futhi kuyaqabukela ubone ubhiya emathini, ngakho-ke njengamanje ubhiya usemabhodleleni engilazi. ibuye ifane nebhiya esezingeni eliphakeme. Kwenzekani? Kuvela ukuthi ubhiya ekuqaleni ubilisiwe kusuka embewini kakolweni, ngakho-ke kufakwa i-carbon dioxide noma i-nitrogen ukucindezela lapho kugcwaliswa, bese umoya-mpilo osebhodleleni ukhishwa ngangokunokwenzeka.
Ngakho-ke, kusukela ezintweni zamakani namabhodlela engilazi, siyabona ukuthi yimuphi umphumela wokucindezela ongcono. Ukushuba okusobala kwebhodlela lengilazi kukhulu futhi kunamandla kunamathini. Ingcindezi engayithwala inkulu kakhulu kunaleyo yamakani. , Lapho ingcindezi yanda, ingangezwa ingcindezi ephezulu, ukuze ikhwalithi kabhiya ivikelwe kangcono. Ngaphezu kwalokho, ingilazi ekuqaleni iyinto enezici zamakhemikhali ezizinzile kakhulu, futhi ayenzi ngokwamakhemikhali notshwala obusebhodleleni. Kodwa-ke, amathini ngokuvamile enziwe nge-aluminium-iron alloy njengezinto zokusetshenziswa. Okunye kungenzeka uma kuhlangana nobhiya. Ukuphendula, ngokuhamba kwesikhathi, ukunambitheka kukabhiya kuzoba noshintsho olukhulu kakhulu, okwenza ubhiya unambitheke kabi futhi ube yinsimbi.
Ngakho-ke uma siphuza ubhiya ukuze kube lula futhi sisheshe, hhayi kulabo abaneziqu zobhiya ezicebile, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, sikhetha ubhiya osemathinini, ngoba asinakho ukuphishekelwa okuphezulu kwekhwalithi kabhiya, futhi asiphuzi kakhulu. Khethe kakhulu. Kodwa-ke, uma ungacabangi ngesisindo nokuphatheka, ngokombono wokunambitha ubhiya, ubhiya osemabhodleleni engilazi ungcono kunobhiya osemathinini. Ngakho-ke, uma sifuna ukunambitha ikhwalithi nokuchazwa kukabhiya, kungcono ukukhetha ubhiya osezingeni eliphezulu emabhodleleni engilazi.